Qindaa'inootni kunneen yeroo kaadimni Microsoft OLE hin jirre (fakkeenyaaf,UNIX keessatti) yookiin yeroo LibreOffice OLE gulaala waantota OLE hin jirre raawwatu.
Yoo kaadhimaan OLE wanta ida'ameef ka'aa ta'e, kaadhimaan OLE wanticha to'achuuf fayyada.
Yoo kaadhimaan OLE wanta MathType ka'aa ta'e, idaatii wanta MathType gara wanta LibreOffice Math jijjiiramuu danda'a. Jijjiirraa kanaaf, idaatiin wanta MathType garuu MathType 3.1 caaluu hin qabu.
Sanduuqa sarjaa [L] keessaa galfata fuulduratti yoo waanti Microsoft OLE waanta OLE LibreOffice eerametti jijjiiramuuf jedhu yeroo galmeen Microsoft LibreOffice tti fe'amu mallatteessi.
Sanduuqa sarjaa [S] keessaa galfata fuulduratti yoo waanti Maayikiroosooftii OLE waanta OLE LibreOffice eerametti jijjiiramuuf jedhu yeroo galmeen gita Maayikiroosooftii tiin olkaa'amu mallatteessi.
Title is: Maaykiroosooft office